कस्ता छन् प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रका प्रमाणपत्र ? हेर्नुस् - Everest Dainik - News from Nepal
कस्ता छन् प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रका प्रमाणपत्र ? हेर्नुस्
काठमाडौं, भदौ २३ । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित ओमप्रकाश मिश्रको संसदीय सुनुवाइ आगामी सोमबार हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्राप्त प्रमाणपत्रअनुसार मिश्रको जन्म सन् १९५४ जनवरी १ मा भएको स्रोतले बतायो । मिश्रले सन् १९६९ मा भारत उत्तर प्रदेशको नौतनुवामा माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट हाइस्कुल अध्ययन गरेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस आजदेखि जोशी विदामा, मिश्रले पेशी तोक्ने
१९९१ को जुलाई ६ मा उनले नौतनुवाबाटै इन्टरमिडियट पास गरेको देखिन्छ । उनले १९७३ मा गोरखपुर विश्वविद्यालयबाट विज्ञान संकायमा दोस्रो श्रेणीमा स्नातक गरेका हुन् । उनले सन् १९७९-८० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका हुन् ।
सन् १९८५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उनले राजनीतिशास्त्रमा स्तातकोत्तर गरेका छन् । सन् उनीसँग १९८८ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एलएलएम उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: Om Prkash Mishra, ओमप्रकाश मिश्र